Abaribarin’ny Fanafihana Ilay Amerikana Mpanangom-baovao Ny Maha-zavatra Mahazatra Ao An-tananan’i Mexico Ny Herisetra Ara-nofo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Marsa 2016 15:50 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, čeština , Español
Pikantsarin'ny tafa niresahan'i Andrea Noel tamin'ny El Universal momba ny herisetra ara-nofo nanjo azy.
Amerikana mpanao gazety tsy mainkina i Andrea Noel (izay mpandrindra ny matoandahatsoratry ny VICE News Latin America tany aloha) ary nitatitra fa niharan'ny herisetra ara-nofo nataon'olona tsy fantatra izy teny an-dalamben'ny tanànan'i Mexico. Ny 8 Martsa no niseho ilay raharaha, andro nankalazàna indrindra ny Andro Erantany ho an'ny Vehivavy.
Antoandro benanahary no nitranga ilay fanafihana, tao amin'ny distrkan'i Condesa, toerana iray malaza sy falehan'ireo vahiny ary mpizahatany. Raha iny mandeha an-tongotra iny indrindra i Noel, no tonga avy any aoriany ilay mpamely azy, nisintona nanàla ny atin'akanjony, ary nanainga ny zipony talohan'ny nandosirany. Rehefa niverina tamin'ny fahatoniany izy, nitady ireo tomponà trano fivarotana teo amin'ny manodidina i Andrea mba hanontany azy ireo raha toa ka azo sary tamin'ny kamerà fanarahan'izy ireo maso ny fanafihana nanjo azy.
Taorian'ny nahazoany ny lahatsary, nandeha nanatona ny manampahefana i Noel mba hitatitra ny zavatra nitranga ary avy eo nizara ity lahatsary ity tao amin'ny Twitter:
Raha misy olona mahafantatra ilay mitapy ity, miangavy mba hanondro azy. Tokony ho afaka hivezivezy am-pilaminana ny vehivavy. #ArahabaNahatratraNyAndroErantanyHoAnyVehivavy
Namoaka fanambaràna iray ny VICE News nanamelohan-dry zareo ilay fanafihana, nilazàny hoe :
Mino izahay ato amin'ny VICE fa tena ilaina ny hanaovana adihevitra tsy miato momba ny herisetra atao noho ny maha-lahy na vavy, izay iainana eto amin'ity firenena ity, ary ity no fitaratry ny fisehoan'io tranga io isanandro vaky ato anatin'i Mexico. Ambonin'ny fahafantarana ny zavamisy, naneho ny fanohanany manokana ireo mpikambana avy ao amin'ny VICE Media no sady koa niasa nanao fandrakofana ankapobeny mametraka ny tranganà fanavakavahana sy fanararaotana ara-nofo ao Mexico.
Tao anaty tafatafa iray niarahana tamin'ny El Universal TV ao Mexico, naneho hevitra i Noel fa tsy vao voalohany izao no niharan'ny heloka bevava tao an-drenivohitra Meksikana izy, ary tany aloha tany dia noteren'ireo mpampanoa lalàna izy tsy hametraka fiarainana ofisialy.
Telo mpanao heloka bevava no mbola miriaria eny an'arabe satria ampanginin'ireo manampahefana ny niharam-boina.
Na teo aza ny fahasahiranana natrehany tamin'ny fiezahana hitondra ny raharaha ho eny amin'ny fitsaràna, notazoniny ny filazàna fa tsy ao an'eritreriny mihitsy ny hiverina ho any Etazonia :
Raisiko ho toy ny fireneko i Meksika manoatra noho i Etazonia, tsy hiverina aho, ary raha toa ka manao izany, mety ho antery, azonareo ve ?
Notondroin'i Noel ihany koa ny olan'ny kolontsaina manodidina ny sotasota ara-nofo ao Mexico, isan'izany ny fidiran'ny hoe tsy maintsy manaiky ny lehilahy ny vehivavy. Ny piropo no endrika iray amin'ny herisetra ara-nofo, fikaotiana manta beizay miseho isanandro vaky atao amin'ireo vehivavy ary, matetika, dia eken'ny fiarahamonina.
Gabriel Páramo, profesora sady mpanao gazety, niteny izao manaraka izao momba io karazana fanararaotana io :
Araka izany, lasa lasibatra ny vehivavy, matetika toa tsy tonga saina amin'izany akory na ireo niharany na ireo nanatanteraka, amin'ny fomba fiteny mametraka ny vehivavy ho any amin'ny laharana faharoa [aorian'ny lehilahy], izay mamadika azy ireo ho toy ny fitaovana na zavatra natao hodinidinihana/hojerijerena. Araka ny efa nolazaintsika, mino ireo lehilahy Meksikàna fa manana zo hitsara ny vehivavy amin'ny endrika ivelany.
Ny fehinkevitr'ireo mpianatro, ireo vondrona roa izay vehivavy no ankamaroan'ny ao anatiny, dia hoe tsy tokony ho izany no izy, ary ezahan-dry zareo ny hampiseho an'io any anaty fanentanana toy ny #PodríasSerTú [#MetyHo_ìanao], ka tanjona ao anatiny ny hampiseho fa fanitsakitsahana ny fanaovana sotasota; ary ny #nonosgustanlospiropos [#TsyTianayNyDokadokanareo] (fameperana ampiharina) izay ao anatiny dia takiana ireo lehilahy mba tsy hilaza izay eritreriny momba ny vehivavy tsy manana fifandraisana aminy na kely aza..
Mampalahelo, zavatra mahazatra eny an'arabe ao an-tanànan'i Mexico ny sotasota ara-nofo, indrindra fa any anaty fiara fitaterana ho an'ny daholobe izay ampiasain'ny olona marobe. Na ohatra aza, efa notaterin’ny Global Voices tany aloha tany, ampahany kely amin'ireo mpandeha no efa manomboka manaiky ireny safosafo ireny sy ireo endrika fikitikitihana hafa ataon'olona tsy fantatra, tondroina amin'ny hoe arrimón consensuado ao Mexico, na ny frotteurism ifanekena.
Amin'ny tranga rehetra, tsy azo ekena hoe ny hersetra sy ny fanafihana atao amin'ny vehivavy ao Mexico dia tsy ho voasazy, ary io dia olana iray izay hotohizantsika ny tatitra momba azy.